La bilaabay version 138 ee Sahaminta Falanqaynta Safari | Waxaan ka socdaa mac
La bilaabay nooca 138 ee Sahanka Teknolojiyada Safari
Mid kale oo ka mid ah biraawsarkaaga tijaabada ah ee Apple wuxuu gaaraa dadka isticmaala kuwaas oo ku rakibay Mac-kooda, nooca cusub ee la sii daayay waa 138 oo, sida kiisaska intooda badan, wuxuu saxaa khaladaadka qaar wuxuuna ku daraa hagaajinta amniga caadiga ah ee ay inta badan fuliyaan. Noocan cusub ee browser-ka waxa uu imanayaa bil uun ka dib markii la sii daayay nooca 137, Apple wakhtigan waxa ay kordhisay sii daynta inta u dhaxaysa noocyada ay sababto ciidaha Kirismaska.
Farsamada Safari 138 wuxuu ku saleysan yahay cusboonaysiinta cusub ee Safari 15 waxaa lagu daray macOS -kii ugu dambeeyay ee Monterey beta, sidaa darteed waxaa ku jira qaar ka mid ah astaamaheeda sida bar tab oo la fududeeyay oo leh taageero kooxaha tabs iyo taageero la hagaajiyay oo loogu talagalay fidinta shabakadda Safari.
Cusboonaysiintaan cusub ayaa laga heli karaa qaybta Cusboonaysiinta Software ee Doorbidyada Nidaamka, inta aad hore u soo dejisatay nuqulkii hore ee barowsarkaan tijaabada ah. Si aad u isticmaasho biraawsarkan, muhiim ma aha in la yeesho koonto horumarineed waxayna u shaqaysaa si gooni ah oo ka madax bannaan nooca Safari ee lagu rakibay kombiyuutarka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » La bilaabay nooca 138 ee Sahanka Teknolojiyada Safari
Apple Music wuxuu leeyahay 15% suuqa muusiga ee qulqulka
WhatsApp for Mac wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hakiso oo aad dib u bilowdo duubista codka